Stoney Coral Tissue Loss Disease | Reef Resilience
Ahoana ny fomba itaterana SCTLD
Raha ahiahiana eo amin'ny toerana misy anao ny SCTLD, dia ilaina ny mitatitra ny aretina sy mizara sarin'ireo mpanjanaka marary mba hanamarina fa SCTLD. The misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAtlantika sy Gulf Rapid Assessment (AGRRA) Database Ny angon-drakitra dia manangona ny tatitra momba ny aretina manerana an'i Karaiba, anisan'izany ireo sary sy fampahalalana hafa, izay mora hita amin'ny tranokalany.
Stoney Coral Tissue Manimba ny Aretina, na SCTLD, dia aretina misy fiantraikany amin'ny karazam-borona sarobidy 20 any Karaiba. Amin'izao fotoana izao dia miteraka fahasimbana amin'ny haran-dranomasina any Florida ary manomboka mitatitra any amin'ireo nosin'i Karaiba hafa. Na dia tsy mahazatra amin'ny haran-dranomasina aza ny aretina, ny SCTLD dia miteraka loza mananontanona ho an'ny vatohara Karaiba noho ny halehibeny goavana, ny faharetany, ny halafon'ny fiainana an-tany, ary ny karazan-karazan-kazo maromaro voakasika.
Ny SCTLD dia ahiahiana ho vokatry ny aretin'ny bakteria ary azo alefa any amin'ny vatohara hafa amin'ny alàlan'ny fifandraisana mivantana sy ny fivoahan'ny rano. Maro ireo ezaka amin'izao fotoana izao no mamantatra ny aretina, ny fifandraisana amin'ny anton-javatra momba ny tontolo iainana, ny paikady hikarakarana ireo mpanjanaka malemy, ary ny famantarana ireo karazana vatohara izay manohitra. Miaraka amin'ireo hetsika ireo dia maro ireo harena nohavaozina hanampiana ireo mpitantana sy ireo mpandray anjara hafa amin'ny famantarana sy ny famaliana ilay aretina.
Ireo loharanom-pitaovana omena eto dia hivoatra hatrany ary vokatry ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miasa maro miady amin'ny SCTLD. Kitiho raha hianatra bebe kokoa momba ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaosampana sy fikambanana tafiditra amin'io ezaka io.
Ireo loharanon-kevitra etsy ambany dia manome fanazavana maro momba ny aretina, miaraka amin'ny maro izay manoritsoritra ny fampahalalana momba ny fahalalana ankehitriny sy ny fikarohana ankehitriny.
Tranomboky Webinar an'ny SCTLD, AGRRA
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSCTLD Case Definitionmanokatra fisie PDF (pdf, 2.8 MB) - Manoritra ny fahatsapana ny karazan-karazan-javamaniry samihafa, ny famaritana ny aretina sy ny biolojia, ary ny fikarohana ankehitriny momba ny fanalefahana ny aretina.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFlorida Reef Tract Coral Disease Outbreak FAQmanokatra fisie PDF , Department of Environmental Protection Florida (pdf, 446 KB) - Famerenana fanontaniana mahazatra ary manome fampahalalana ankapobeny momba ny SCTLD.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAretina momba ny fitsaboana any Florida Coralmanokatra fisie PDF , Departments of Florida Department of Environmental Protection (pdf, 607 KB) - Fijerena roa-pejy momba ny fototry ny fihanaky ny valim-panafahana sy ny ezaka amin'ny valin'ny Florida.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAtlantika sy Gulf Rapid Assessment Gulf (AGRRA), Aiza ny aretina ateraky ny aterineto - Manome ny toerana misy any Karaiba amin'ny tranga voamarina amin'ny SCTLD.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampisehoana: "Aretina mampidi-doza ao amin'ny Florida Coral: ny toetry ny ankehitriny, ny fikarohana sy ny valin'ny fitantanana"manokatra fisie PDF , Department of Environmental Protection Florida (pdf, 5.8 MB)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoWebinar Network Reef Resilience Reef: aretina very amin'ny tavy Coral Stony: lesona ianarana sy loharanon-karena - Fampahalalana momba ny fikarohana amin'izao fotoana izao, rafitra fakan-kevitra mifandraika avy amin'i Florida, ny satan'ny SCTLD any Karaiba, ary ny loharano ankehitriny.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoReef Resilience Network Webinar: Famerenana amin'ny laoniny amin'ny vanim-potoanan'ny aretina - Ny mpahay siansa dia miady hevitra momba ny fampifanarahana ny ezaka famerenana amin'ny laoniny mandritra ny fipoahan'ny SCTLD.
Fandraisana an-tsoratra ny atrikasa: Valin-kafatra Virtual Team SCTLD any Florida / Fiaraha-miasa any Karaiba atrikasa momba ny fitsaboana sy ny fitsabahana amin'ny aretina fatiantoka corps coral corps: fomba fiasa, lesona nianarana ary fomba hafa (adiny 3)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDrafitra fanatanterahana aretina amin'ny Repoblika Dominikaninamanokatra fisie PDF (Espaniôla) - Namboarina ho an'ny ekôzistia haran-dranomasina any amin'ny Repoblika Dominikanina, ity drafitra ity dia misy famolavolana fanaraha-maso hanombanana ny toetran'ny aretina sy ny fanadiovana ny haran-dranomasina, ary mamaritra ny hetsika manokana hanaraha-maso, hifandraisana, hitantanana ary hamoronana fitsabahana hisorohana na hanatsara ny fahavoazana. ny haran-dranomasina noho ny SCTLD na ny fanadiovana vato harana.
Drafitra fanaraha-maso sy valin'ny hetsika SCTLD ho an'ireo mpiandraikitra ny harena voajanahary any Karaibamanokatra fisie PDF , MPA Connect (pdf, 2.1 MB) - Manome fampahalalana momba ny antsipirihany sy protocols amin'ny fanaraha-maso ny aretina, fitsaboana fitsabahana, fomba fisorohana ary maro hafa.
Ireo tranonkala manaraka dia novolavolan'ireo mpiara-miasa ary manome fampahalalana sy loharanom-baovao samihafa momba ny aretina.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAtlantika sy Gulf Rapid Assessment (AGRRA) Database - Manome toerana ho an'ny fandefasana tatitra momba ny SCTLD amin'ny anaran'ny siansa sy ny haran-dranomasina, sarintanin'ny tatitra amin'izao fotoana izao any Karaiba, ary loharanom-pahasalamana maro.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDep. Florida Department of Environmental Protection Stony Coral Tissue Loss (SCTL) Response to Disease - tranonkala ahitana loharano maro momba ny aretina, ny ezaka fanehoan-kevitr'i Florida, ary ny fahafaha-manaon'ny olom-pirenena sy ny media.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFlorida Keys National Marina Sanctuary SCTLD Portal - Mampiantrano vaovao momba ny fikarohana sy loharano vao haingana hita amin'ny fipoahan'ny aretina.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoGulf and Caribbean Fisheries Institute Website - Fitehirizam-boky mahaleotena misimisy ao amin'ny SCTLD.
Fantaro ny aretina
Ity aretina mikrôba ity dia hita amin'ny ankapobeny karazam-bolo maro amin'ny vatohara maty izay mitranga any amin'ny faritry ny haran-dranomasina ary miely haingana mba hampijaliana ny isan'ny maty. Ireto ambany ireto ny loharanom-pahefana hanampy amin'ny fomba mahalaza ny SCTLD raha oharina amin'ny antony hafa momba ny mety ho faty eto an-tany.
Torolàlana MPAConnect mba hahitana ny SCTLD amin'ny Caribbean Coral Reefs, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPrint Versionmanokatra fisie PDF (pdf, 5.5 MB); misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDigital Versionmanokatra fisie IMAGE (pdf, (479 KB) - Famintinana tokana misy sarin'ireo karazana azo tsoahina sy ireo mpitantana ny hetsika.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSCTLD Aretin'ny PowerPointmanokatra fisie PDF , Ny Oniversiten'i Nova Southeastern (pdf, 5 MB) - Manome sarin'ny valan-javaboahary maro ho an'ny karazam-biby 14 hafa.
Karazana famantarana momba ny saha (Departments Florida ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana, fiompiana fikarakarana ny biby fiompy any Florida, ny NOAA, ary ny National Park Service) - Sarin'ireo karazana marary malemy izay mety ho laminasa sy ampiasaina eny an-kianja.
Card 1 - misokatra amin'ny varavarankely vaovaoanoloanamanokatra fisie IMAGE , misokatra amin'ny varavarankely vaovaoindraymanokatra fisie IMAGE - (pdf, 10.6 ary 9.2 MB)
Card 2 - misokatra amin'ny varavarankely vaovaoanoloanamanokatra fisie IMAGE , misokatra amin'ny varavarankely vaovaoindray manokatra fisie IMAGE - (pdf, 9,7 ary 8.9 MB)
Card 3 - misokatra amin'ny varavarankely vaovaoanoloanamanokatra fisie IMAGE , misokatra amin'ny varavarankely vaovaoindraymanokatra fisie IMAGE - (pdf, 9.1 ary 9.1 MB)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAtlantika sy Gulf Rapid Assessment Gulf (AGRRA) Fandresena ny Coral Mortality - Manomeza ny famaritana sy ny diaporama miaraka amin'ny sary misy ny toe-javatra samihafa sy ny antony mahatonga ny fahafatesana ho an'ny vatohara hanampy hanavaka ny aretina.
Raha ahiahiana eo amin'ny toerana misy anao ny SCTLD, dia ilaina ny mitatitra ny aretina sy mizara sarin'ireo zanatany marary malemy mba hanamafisana ny aretina. Ny tahiry AGGRA dia manangona vaovao momba ny tatitra momba ny aretina ary afaka manampy amin'ny fanamafisana ny SCTLD ho antony mahatonga ny fiainana an-tany. Ny loharano hafa voatanisa dia azo ampiasaina hanaraha-maso ny aretina.
Fitaovana Daty Daty Daty - Tontolon'ny rakitra fanonona ho an'ny tatitra SCTLD.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoLevel 1manokatra fisie PDF (pdf, 631 KB)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoLevel 2manokatra fisie PDF (pdf, 51 KB)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSCTLD Fanisam-bato Swim Surveymanokatra fisie PDF (pdf, 14 KB) - Manome torolalana amin'ny antsipirihany momba ny mpitsidika amin'ny fanaraha-maso sy fanangonana data amin'ny SCTLD.
Satria SCTLD dia aretina iray miparitaka haingana, dia tena ilaina ny manana drafitra efa misy eo amin'ny toerany amin'ny fomba hamalianao ny aretina raha hitanao eo amin'ny toerana misy anao. Ireo masoivohon'ny fitantanana any Florida dia nanomana loharanom-baovao maromaro etsy ambany izay mamaritra ny drafitra sy ny rafitry ny valin'ny SCTLD.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFlorida Department of Environmental Protection Site Outbreak - Mizara ny ezaka amin'ny valin-kafatra ao amin'ny faritra, manamarika avy amin'ny antso an-tsoratry ny faritra ary fampahalalana avy amin'ny fanadihadiana teo aloha momba ny aretina.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandaharanasa fanodikodinam-piaramanidina Coralymanokatra fisie PDF , Departments of the Department of Environmental Protection (pdf, 2 MB) - Mamaritra ny tanjona sy ny metôlôlôjia amin'ny fitsabahana amin'ny aretina, ny fifantenana ny tranonkala, ny toro-hevitra momba ny fitsaboana ary ny fanaraha-maso.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoIreo ekipa sy rafitra valin'ny fitsaboana ao Floridamanokatra fisie PDF (pdf, 68 KB) - Manoritsoritra ny anjara andraikitra sy ny asan'ny ekipan'ny aretina 10 samihafa any Florida izay miara-miasa mba hamaliana ny SCTLD.
Ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina izay mazoto miasa amin'ny harena voajanahary dia tokony hampahafantarina ny SCTLD any amin'ny faritra mety ho azo tsapaina ary rehefa voamarina ny aretina. Ireto loharanon-kevitra manaraka ireto dia ahitana ohatra momba ny fomba fampahafantarana ny mpikambana ao amin'ny fokonolona momba ny aretina sy hamporisihana azy ireo amin'ny ezaka enti-miasa.
SCTLD Terminology for Clear Science Communications, MPA Connect - Manolotra latabatra fiteny mamitaka momba ilay aretina sy ireo mpisolo toerana hifandraisana tsara kokoa.
anglisymanokatra fisie PDF (pdf, 390 KB)
Espaniolamanokatra fisie PDF (pdf, 399 KB)
Poster momba ny Fahatsiarovan'ny Divermanokatra fisie PDF , MPA Connect (pdf, 3.6 MB) - Loharano azo zaraina ho an'ny mpitsinjara amin'ny fomba hamantarana ny haran-dranomasina marary ary ny fomba hitaterana sy hizarana ny fipetrahan'ny aretina.
Poster ho an'ny fanodinanamanokatra fisie PDF , MPA Connect (pdf, 805 KB) - Loharano azo zaraina ho an'ny mpitsinjara amin'ny fomba fanadiovana ny fitaovan'ny antsitrika.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFomba tsara indrindra ho an'ny hafa, Florida Keys National Sanctuary Marine (pdf, 861 KB) - Manome torolàlana ho an'ny mpitaingina sy snorkelers amin'ny torolàlana ankapobeny momba ny fahasimbana sy ny fomba famantarana sy tatitra SCTLD.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamoahana sy fivoriana fanangonam-bokin'ny Virgin Islandsmanokatra fisie PDF (pdf, 272 KB) - Manome ohatra amin'ny valin-kafatra haingana amin'ny fiarahamonina ao an-toerana taorian'ny notaterina tao amin'ny nosin'i Virgin Islands.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitsipika ankapobeny momba ny fanavakavahana amin'ny fahasamihafanamanokatra fisie IMAGE (pdf, 861 KB) - Fampahafantarana mampiavaka ny "Do's" sy "Don'ts" ho an'ny fitaovana fanararaotana fanindronana.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy Protocollage contamination protéinemanokatra fisie PDF (pdf, 184 KB) - Manome torolàlana amin'ny antsipirihany momba ny fanadiovana sy ny fanadiovana ny fitaovana fanjonoana hanatsarana ny fihanaky ny SCTLD.
'Inona no mitranga amin'ny Corals?' Infographic - misokatra amin'ny varavarankely vaovaoanglisymanokatra fisie PDF (pdf, 7.6 MB); misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEspaniolamanokatra fisie PDF (pdf, 7.5 MB) - Fampahalalana iray amin'ny pejy iray ho an'ny fiarahamonina momba ny aretina, ny fomba hahafantarana azy, ary ny fihetsika handray / tsy ho olom-pirenena.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHo lasa Tompondakan'i Coral, Departments of Environmental Protection Florida - Manoritsoritra fomba fanao amin'ny ankapobeny ho an'ny olom-pirenena amin'ny fisamborana, fanjonoana ary fanjonoana mba hampihenana ny fiantraikany amin'ny haran-dranomasina.
Alefaso azafady resilience@tnc.org mamorona mailaka vaovaoraha tianao ny hampiditra loharano fanampiny na tranokala ao amin'ny Aretin'ny Tissue Lye Stony Coral.